Zvakawanda sei zvaunoziva nezve kurongedza zvisimbiso?-CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd.
Zvakawanda sei zvaunoziva nezve kurongedza zvisimbiso?
Time: 2021-12-08 Hits: 7
Nzira yekusarudza nzira yekuisa chisimbiso paunenge uchigadzira muchina? Ichi chinyorwa chinokutora iwe kuti unzwisise zvakajairika dynamic seal mafomu mune mechaniki dhizaini. Vari kurongedza chisimbiso, mechanical seal, yakaoma gasi chisimbiso, labyrinth chisimbiso,
chisimbiso chemafuta, chisimbiso chine simba uye spiral chisimbiso. Nhasi, ngatikurukurei chisimbiso chekurongedza pamwechete kutanga!
Kurongedza zvisimbiso zvinogona kukamurwa kuita zvisimbiso zvakapfava zvekurongedza, zvisimbiso zvekurongedza zvakaomarara, uye zvakaumbwa zvekurongedza zvisimbiso zvinoenderana nehunhu hwazvo.
1) Yakapfava kurongedza chisimbiso
Runyoro kurongedza mhando: kurongedza
Kurongedza kunowanzo kurukwa kubva kune shinda dzakapfava, idzo dzinozadzwa mugomba rakavharwa nemitsetse ine square cross-sectional area. Simba rekudzvanya rinogadzirwa negland yekumanikidza kurongedza uye kumanikidza kurongedza kuve
yakadzvinyirirwa pachisimbiso chepamusoro (shaft). Pamusoro pekunze uye mhango yakavharwa), iyo radial simba rekuisa chisimbiso mhedzisiro inogadzirwa, nekudaro ichiita basa rekuisa chisimbiso.
Zvinoshanda nguva dzekupfava kurongedza:
Iyo yekurongedza zvinhu inosarudzirwa kurongedza inosarudza iyo yekuisa chisimbiso yekurongedza. Kazhinji kutaura, kurongedza zvinhu zvinoganhurwa netembiricha, kudzvanywa uye pH yesvikiro rekushanda, uye kushata kwepamusoro uye.
eccentricity yemuchina wemuchina panoshanda kurongedza Uye kumhanya kwemutsara, nezvimwewo, ichavawo nezvinodiwa pasarudzo yekurongedza zvinhu.
Graphite packing inogona kumira kupisa kwepamusoro uye kudzvanywa kwepamusoro, uye ndeimwe yezvigadzirwa zvinoshanda kugadzirisa dambudziko rekushisa kwepamusoro uye kuvharirwa kwepamusoro. Corrosion resistance, kunyatsoisa chisimbiso kuita
-ance, yakagadzikana uye yakavimbika basa.
Aramid packing imhando yepamusoro-simba organic fiber. Iyo yakarukwa yakarongedza yakamisikidzwa ne polytetrafluoroethylene emulsion uye lubricant.
Polytetrafluoroethylene packing yakagadzirwa yakachena polytetrafluoroethylene dispersion resin seyakabikwa, yakatanga kugadzirwa kuita firimu mbishi, yozomonywa, yakarukwa uye yakarukwa mukurongedza. Inogona kushandiswa zvakanyanya mukudya, mishonga,
papermaking, kemikari faibha, etc. Utsanana zvinodiwa, uye mavharuvhu uye pombi ane simba inoodza vezvenhau.
2. Chisimbiso chekutakura chakaoma
Kune mhando mbiri dzezvipupuriro zvakaomarara: mhete yakakamurwa uye mhete yakatsemurwa.
Prev: Zvishandiso zvakajairika uye chiyero chekushandiswa kweO-mhete
Zvadaro: Ndedzipi nzira dzekubvinza dzechisimbiso chemhete? Nei paine mvura yadeuka?